iPhoto ndabere: ụzọ dị iche iche ndabere iPhoto
Anọ Ụzọ ndabere iPhoto
iPhoto bụ wuru na-foto faili na ọ bụghị naanị na-enyere gị hazie ma dezie foto gị, kamakwa ka ị ga-esi ọzọ si foto ndị a site na-eme foto akwụkwọ, kaadị ekele na slideshows. Site na nke a mgbe, iPhoto adịghị echekwa dijitalụ photos. Kama, ọ na-azọpụta gị na-echeta.
Ya mere adịkwa afọ nke foto echekwara na iPhoto na-maa a ọdachi. Chegodị nwa gị mbụ ọnụ ọchị na nzọụkwụ mbụ foto, nwa gị nwanyị ngụsị akwụkwọ photos, nakwa dị ka obi ụtọ oge gị na ezinụlọ gị na ndị enyi - niile na-arahụ. Ma na-eche na a nkeji; gịnị mere ndabere iPhoto iji mee ka a mgbe na-eme?
1. ndabere iPhoto ka CD / DVD
2. Jiri Oge Machine
3. Ndabere iPhoto ka mpụga ike mbanye
4. Ndabere iPhoto ka Ígwé ojii Nchekwa
N'ezie, iPhoto abịa na mfe ọkụ nhọrọ ndabere gị iPhoto oyiyi na CD / DVD. Ebe a bụ otú:
2.Select foto na ị chọrọ ndabere ka CD / DVD. Ị nwere ike họrọ dum Ọbá akwụkwọ, otu album ma ọ bụ ihe omume, ma ọ bụ nanị ole na ole photos. Chetara ihe ịchọrọ ndabere-elu site na ịpị ya. Ị nwere ike họrọ multiple ihe, albums, ma ọ bụ foto site na-ejide ala Mgbanwe isi mgbe ị pịa. Rịba ama na ọnụ ọgụgụ nke foto ndabere ka CD / DVD bụ nanị site na ikike nke CD ma ọ bụ DVD diski. A CD nwere ike ijide ruo 700 MB nke data; a DVD nwere ike ijide ruo 4.7 GB.
3.Go ka Ekekọrịta Ọkụ si iPhoto menu, na-eso ntụziaka na ihuenyo. Mkpa ka ị fanye CD / DVD diski na ndenye diski aha.
4.Click Ọkụ nkwado ndabere na mpaghara iPhoto ka CD / DVD. Mgbe ọ bụ zuru ezu, na-echekwa gị okokụre diski n'ebe dị nchebe - na-akọrọ na nke nwa aka.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-adịghị iDVD, dị nnọọ nwalee ọzọ dị ike DVD ọkụ software maka Mac >>
2. Iji Oge Machine
Dị ka Mac njirimara, i nwere ike ugbua mara na ọhụrụ ọ bụla Mac-abịa na ya ma dị ike ndabere-akpọ ngwá ọrụ Time Machine. Ọ bụ ihe akpaka ndabere omume na a bootable oyiri nke draịvụ ike gị na mgbe etiti oge.
Biko na-achọpụta na, ọ bụrụ na iPhoto na-agba ọsọ, mgbe ahụ ọba akwụkwọ agaghị kwadoo Time Machine n'oge azụ elu usoro. Otú ị ga-nnọọ iPhoto iji hụ Time Machine Akwadoo elu gị ọbá akwụkwọ. I nwekwara ike iji aka ndabere site ịkwụsị iPhoto, mgbe ahụ, na-ahọrọ Back Up Ma site Time Machine menu amara.
Ụzọ ọzọ na nkwado ndabere na mpaghara iPhoto bụ iji mpụga ike mbanye. Ihe mkpa ka ị ndabere iPhoto ka mpụga ike mbanye (HD) bụ naanị a pụrụ ịdabere na draịvụ ike. Ụfọdụ n'ime ndị a pụrụ ịdabere ụdị si n'ebe bụ Samsung, Toshiba, Seagate, na Western Digital. I nwere ike dị eso mfe nzọụkwụ n'okpuru:
1. shutdown iPhoto ọ bụrụ na ọ ga-emepe.
2. Jikọọ gị mpụga ike mbanye gị Mac iji firewire USB ma ọ bụ eriri USB. Nke ahụ bụ adabere na draịvụ ike gị.
3. Gị mpụga ike mbanye ga-ghọtara site Mac na ndokwasa. Ọ bụrụ na, wụnye mkpa ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ na-ezo aka ọrụ ntuziaka.
4. Chọta gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ site na ịga na Home (aha njirimara) Pictures iPhoto Library, na ikpuru-dobe ka mpụga ike mbanye window.
5. Kpọgharia aha na mbụ iPhoto Library ka iPhoto Library.old ma ọ bụ ihe ọzọ.
6. Jide nhọrọ isi na-emeghe iPhoto. Ị ga-kpaliri iji họrọ ihe Photo Library iji. Họrọ iPhoto Library (na mpụga ike mbanye).
7. iPhoto kwesịrị Ibu Ibu gị niile foto si mpụga ike mbanye. Tupu ị na-iPhoto Library.old ihichapụ, abụọ ego foto gị.
8. Hichapụ na iPhoto Library.old nyak ohere, ma ọ bụ na-ya maka ụbọchị ole na ole dị nnọọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi.
N'ezie e nwere ọhụrụ iPhoto ndabere usoro: ndabere iPhoto ka Ígwé ojii Nchekwa. Ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ndú ndị Carbonite (Unlimited GB maka $59.99 / afọ), Backblaze (Unlimited GB maka $ 50 / afọ), na SugarSync (60 GB maka $74.99 / afọ). Ụfọdụ nke ụlọ ọrụ na-enye a elu ọnụ kwa ọnwa ego ọrụ. Dị nnọọ họrọ nke nhọrọ bụ nri maka gị.
Olee otú Jiri iPhoto Library Manager
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka ajụkarị iPhoto Issues
Best Atụmatụ & Aghụghọ-aghọ Ike ọrụ nke iPhoto '11
Wedding ngosi mmịfe Songs Aro - Songs maka Wedding ngosi mmịfe
Olee otú Mee a Math Quiz
> Resource> Atụmatụ> iPhoto ndabere: Gịnị bụ ụzọ kasị mma na ndabere iPhoto?